Dib-ugu-soocelinta Sahaminta Dahabka Dahabka & Dahabka ah 'Ellicott Dredges'
Dib-u-habeynta Dhirta Macdanta (Dahabka & Qalinka) oo leh Ellicott Dredges
JAMHUURIYADDA DOMINIKAN - Taariikh ahaan, habraacyada macdanta oo leh heerar soo kabasho oo liidata ayaa ka dhashay dabinno wata qaddar muhiim ah oo ka mid ah sheyga dib loo soo celin karo. Soo saarista maaddadan waxaa lagu gaari karaa iyadoo la adeegsanayo biyo-baxa.
Dabada waxay u baahan tahay ilo yar markii la barbar dhigo macdanta caadiga ah. Tusaale ahaan, gododku waxay - hal talaabo - soo saari karaan oo ku qaadi karaan alaabta warshad wax lagu farsameeyo oo ku taal xitaa kiiloomitir. Tani waxay yareynaysaa kharashyada la xiriira qalabka raasumaalka, shaqada, shidaalka iyo dayactirka.
2012, Envirogold wuxuu iibsaday hal cabir caadi ah Ellicott 370 si uu uga soo saaro dabada ka soo qulqulaya biyo-xidheenka oo ugu ridayo warshaddooda.
Qoditaanka waxaa loo adeegsaday in laga soo saaro walxaha moolka dheer ilaa 8m oo loo tuuro sida masaafada u dhexeysa 500m iyo 800m iyo heerka sare ee 11m. Dharbaaxada waxaa lagu tuuraa iyadoo la isticmaalayo tuubbo HDPE ah oo 10-inch ah. Daadku wuxuu abuuraa oo bambooyinku ku sifeeyaan cufnaan dhan 28%. Dabada ayaa leh walxaha Gaarka ah ee 2.69 iyo cufnaanta bulk qoyan ee 1.71t / m3.
Si loo kordhiyo awooda wax soo saarka iyo in la bixiyo dabacsanaan badan howsha, Envirogold wuxuu iibsaday labaad 370 dredge laga bilaabo Ellicott gudaha 2013.
Si si wanaagsan loogu maareeyo qalabka iyo biyaha howlgalka qodista, biyo xireenka waxaa loo kala qeybiyey qaybo yar yar oo loo yaqaan balliyada haynta. Mar haddii qayb biyo-xireenka ka mid ah la qallajiyey, faaruqinta la abuuray ayaa loo isticmaalaa in dib loogu dhigo dib-u-habeyn lagu farsameeyo geedka, sidaasna lagu ilaaliyo raadka biyo-xidheenka. Howlgalka qodista ayaa looga faa'iideysanayaa biyaha jira ee biyo xireenka. Biyaha la qariyey ayaa dib loogu wareejiyey balliga qashin qubka sidaa darteed biyo dheeraad ah looma baahna.
Saddexda bilood ee ugu horreeya ee 2013, qulqulka ugu horreeya ayaa la soo saaray oo la bamgareeyay ku dhawaad ​​80,000 m3 eefintii qoryaha si looga sameeyo warshad.
The Ellicott Series 370 heerka dredge waa naas-nuujin ku shaqeynaya naaftada ku shaqeeya oo leh mashiin 12 ″ x10 ″ ah iyo 440 HP oo wadarta korantada lagu rakibay. Waa wax aad u awood badan, la isku halleyn karo oo la qaadan karo oo ku habboon nooca noocan ah. Qaybta koowaad waxaa la siiyay qalab wax lagu gooyo oo caadi ah, halka qaybta labaadna ay ku jirto mashiinka wax lagu gooyo ee baaldiga lagu xiro.
Isbedelada suuqyada iyo tikniyoolajiyadda ayaa ka dhigaya dib-u-warshadaynta dabo-dabo aad iyo aad u soo jiidasho leh. Awoodda ay u leedahay inay si kalsooni leh u soo saarto waxyaabo badan oo ay u daabusho iyada oo aan loo baahnayn in la labalaabmo, ceelku waa shaqada ugu habboon ee mashaariicdan. Iyadoo in ka badan 125 sano oo waayo-aragnimo ah naqshadaynta iyo soosaarida tayada ugu sareysa, kuwa ugu awooda badan uguna kalsoonida badan, Ellicott Dredges waa xalka saxda ah!